Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya oo goordhaw Dagaal Culus kula wareegay Degmada Buurdhuubo	« AYAAMO TV
Ciidamada Dowlada iyo kuwa Itoobiya oo goordhaw Dagaal Culus kula wareegay Degmada Buurdhuubo
689 Views Date March 9th, 2014 time 5:29 pm
Wararka aan ka heleyno Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo ayaa sheegaya in goordhaw Ciidamada Dowlada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay degmadaasi la wareegeen kadib dagaal culus oo halkaasi ka dhacay.
Ciidamada Huwanta ah ayaa dagaal culus waxa ay Al-Shabaab kula galeen Duleedka Degmada Buurdhuubo , iyagoona ugu dambeyn goordhaw gudaha u galeen Ciidamada Huwanta ah Degmadaasi oo gacanta AL-Shabaab maanta ka baxday.
Wararkii ugu dambeeyay aan ka heleyno Degmada Buurdhuubo ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ay isku fidinayaan Degmadaasi, halkaasna ay bilaabeen baaritaano ay ku raadinayaan Dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo loo maleenayo in halkaasi ku hareen.
Rasaas goos goos ah ayaa wali laga maqlayaa Gudaha Degmada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo ,waxaana la ogeyn halkii ay aadeen Dagaalyahandii Al-Shabaab ee horey gacanta ugu hayay degmadaasi.
Wali lama oga qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee kala gaaray Ciidamada ku dagaalamay duleedka iyo gudaha Degmada Buurdhoobo , waxaan sidoo kale laheyn qasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee gaaray dadka rayidka.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya oo gacan milatari ka helayay Ciidamada Itoobiya ee dhawaan ku biiray Howlgalka AMISOM ayaa sadaxdii maalin ee lasoo dhaafay waxa ay Al-Shabaab kala wareegeen ilaa Sadax Degmo oo kuyaala Gobolada Bakool iyo Gedo.